China Medical film self service printer terminal Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Quotation - Shenzhen JAK Medical Technology Co, Ltd.
Imba > yakazvimiririra sevhisi firimu muchina yakazvimiririra sevhisi firimu muchina > Medical firimu unozvishandira purinda inouraya
Firimu yekuzvishandira yega yekudhinda terminal, iyo inotsigira bar kodhi kuongorora, kadhi rekurapa kuverenga, kudhinda kumwe chete kweyekuongorora mushumo, firimu / mushumo ruzivo, kudhindwa kwefirimu uye mushumo senge CT, MRI, DR / CR / DSA / ultrasound / gastroscopy / pathology / nezvimwewo.
JAK900E yekuzvishandira sevhisi kutora firimu muchina unonyanya kushandiswa mune ultrasonic department self-sevhisi kutora firimu, inotsigira akasiyana marudzi ekuongorora mhando dzefirimu yekudhinda kuburitsa.
1. Kubata panguva yakakodzera: kunatsiridza nharaunda yekurapa uye kubata nenhamba huru yemishumo nenguva.
2. Kuzvibatsira-kutora firimu kutora: murwere anotora iyo firimu ari ega, iyo isingakanganiswe nebasa revashandi vekurapa.
3, kukwirana kwakakwirira: kunoenderana neazvino makuru PACS, RIS, LIS, HIS system.
4, Yakasimba kugadzikana: maawa makumi maviri nemana basa, yakasimba kubata kwekukurumidza chinzvimbo.
5. Inoshanda uye inokurumidza: unogona nyore uye nekukurumidza kutora iyo firimu uye utaure zvaunoda uchishandisa chitupa chemvumo.
1. CT firimu yekudhinda
2. DR yekudhinda firimu
3, X-ray firimu yekudhinda
4. MRI yekudhinda firimu
5. DSA yekudhinda firimu
6. Dhinda rondedzero yekuongorora
Hot Tags: Medical firimuï¼ŒMedical printerï¼ŒMedical film self service printer terminal, China, vagadziri, vatengesi, fekitori, yakagadzirirwa, mutengo, kotesheni.